GIMP 2.10.12 inowedzera nyowani Offset chishandiso uye zvimwe zvidiki kugadzirisa | Linux Vakapindwa muropa
Nhasi, pandakavhura Discover (iyo Kubuntu software Center), ndakaona kuti GIMP yakaonekwa muchikamu chazvino. Ndakashamisika kuti, kana ndichitarisa, iyo vhezheni yaakaratidza yaive APT iyo ichiri nev2.10.8. Panguva yandakafunga, "Izvi zvinoreva chimwe chinhu," uye zvinoita. GIMP 2.10.12 yave kuwanikwa, one vhezheni inosvika kugadzirisa zvikanganiso zvakasiyana-siyana zvakawanikwa mu previous version kuti yakauya nenhau dzakatanhamara.
Chinoita senge chisingazivikanwe kwandiri ndechekuti Discover yangu hairatidze iyo Flatpak vhezheni GIMP, iyo yatovepo kana isu tisingade kutsvaga mabhinari ayo uye nekuita imwe mhando yekuisa manyore. Izvi zvinogona kureva kuti GIMP yanga isipo paFlathub zvisati zvaitika, asi zvinoita sekunge kune imwe mhando yechinetso inoratidza Flatpak mapakeji muDavhura kana aya ari muAPT kana Snap vhezheni. Chinhu chimwe chete ichi chinoitika neVLC, saka chinofanira kunge chakadaro.
Chii Chitsva muGIMP 2.10.12
Kuvandudza chishandiso cheCurves.
Tsigiro yekutumira materu kuTIFF.
Tsigiro yemafaira akaisirwa mushandisi paWindows (uye ikozvino ndinonzwisisa kuti sei ndisingakwanise kushandisa Ubuntu font paWindows 10).
Yakagadziriswa tsigiro yekufananidza kupenda.
Yekuwedzera maitiro muDodge / Burn chishandiso.
Chishandiso chemahara chekusarudza ikozvino chinogadzira yekutanga sarudzo.
Chishandiso chitsva cheOffset.
Panguva ino, kukwanisa kuisa GIMP nenzira yakapusa isu tinofanirwa kuzviita kubva kune yako Flatpak package, sekureba sisitimu yedu ichienderana nekutadza kana isu takawedzera rutsigiro, chimwe chinhu chichava chakasiyana zvichienderana nekuparadzirwa kwatiri kushandisa. Kune izvi, zvichave zvakakwana kuti isu tiende yavo webhusaiti uye tinya pane bhuruu "Isa" inoonekwa pasi pezita reapp. Neimwe nzira, inogona kuiswa kubva kune iyo terminal nekunyora zvinotevera:
Iko kunyorera kuchaonekwa senge chero chipi zvacho mumenu yekushandisa yekuparadzirwa kwedu kweLinux, kubva kwatingaitange. Kana iyi isiri iyo kesi, tinogona kuitangisa nemirairo inotevera.
Avo vedu vari kushandisa iyo Snap vhezheni isu tichafanira kumirira kugadzirisa yako package. Tinogona kutarisa kana paine vhezheni itsva pamwe nemirairo sudo snap zorodza gimp. Kana iwe wakasarudza iyo APT vhezheni, iwe uchave uchatofanira kuva anoshivirira, sezvo yazvino vhezheni iripo (zvirinani kwandiri) ndeye v2.10.8. Kana iwe ukaisa GIMP 2.10.12, inzwa wakasununguka kusiya zviitiko zvako mune zvakataurwa. Ndiri kuenda kutevera @GIMP_Official pa Twitter kudzivisa kushamisika mune ramangwana ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » GIMP 2.10.12 inowedzera chishandiso chitsva cheOsetset uye zvimwe zvigadziriso zvidiki
Ubisoft inoshandisa blockchain mumitambo yayo yevhidhiyo kuti iite mari nayo